crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Tumaalnimo: wax ka badan xirfad iyo shaqo! | HimiloNetwork
Tumaalnimo: wax ka badan xirfad iyo shaqo!
Posted by: Zakariya in Wararka March 8, 2016	0 422 Views
Muqdisho (Himilonews) – Maalintii ku dhawaad laba bilyan oo dadyowga caalamka kamid ah oo Muslimiin ah ayaa aqrista aayadaha Qur’anka kamid ah iyaga oo Alle ugu dhawaanaya aqriskiisa. Balse in badan oo kamid ah aqriska Qur’anka wuxuu ugu fadhiyaa oo kaliya ajar-doonis. Mana hayaan macno ka duwan oo ay ku sifeystaan macaanidiisa.
Taasi waa dhinaca ay caamada badan oo Muslimiin ah u bateen aragtideeda. Soomaalida oo iyadna ah Ummad Sunni Muslim ah waxay kamid tahay umadahaas.
Hayeeshe waxaa jira xaqiiqooyin qoto dheer oo ku dahsoon mucjisaatka Qur’anka. Sida Alle noo sheegay wax walba waxaa lagu sugay caddeyntiisa Qur’anka dhexdiisa—taas oo ah in maadi iyo macnawiba Qur’anku uu yahay isha koobaad ee cilmiga dunida.
Waana taas markii ay fahmeen Muslimiintii hore kuwii dhaliyey xadaarad ama ilbaxnimo dunida saameysa midi ugu ballaarneyd taariikhda lahayo—taas oo isku xirtay dunida dacalladeeda.
Mid kamid ah aqoonta uu Qur’anka dunida kusoo kordhiyey waa farsamada biraha iyo sida loola fal-galo xadiidka. Alle wuxuu inoo sheegayaa inuu Nabi Da’ud galladaha uu ku manneystay ay kamid tahay inuu baray sida birta loola fal-galo. Waxaa kale oo jirta suurad dhan oo ilaahay uga magac daray suuraddii birta ama Sabaxa Bir, sida ay Soomaalidu u taqaan.
Markii ay hadaba fahmeen macnaha qotoda dheer ee ay aayadani xambaarsan tahay ayay si fiican u dhuuxeen. Waana isla fahamka ah sida birta loola fal-galo halka uu ka bilowday horumarka dunida maanta la iskugu faano—siiba sancada warshadaha, baaburta, diyaaradaha iyo wixii la halmaala.
Marka aynu Soomaaliya ka hadleyno, waxaa kala fog sida aynu maalin kasta ugu macaansano aayadan iyo kuwa lamidka ah iyo sida aynan ugu baraarugsaneyn macnaha xeesha dheer ee ay xambaarsan tahay.
Howsha ah sida loola fal-galo birta iyada oo hadba sidii la doono loo rogrogi karo jeer la adeegsanayo danab dhuxul ama koronto ayaa lagu sheegay Tumaal.
Balse taasi ma ahan magaca ay dunidu ugu yeerto gaar ahaan dhulweynaha Ruushka oo kamid ah kuwa ugu sarreeya sancada la-falgal ee biraha.
Caalamku farsamada gacanta ayuu isku dhaafay, Soomaaliduna ceeb ayay u taqaan.
Hayeeshe inta aanay jirin faham qoto dheer oo lagala soo baxo macaanida Qur’anka iyo hab-la-dhaqan ilbaxnimo oo suuban kuna saleyan ixtiraam iyo xushmad, waa riyo aan rumoobi doonin in dalkan lagu arko gaadiid iyo warshado ay sameeyeen tumaallo Soomaaliyeed oo gudaha dalka iyo dibadiisaba laga adeegsado.
Previous: Dad nolosha lagu gubay kadib tuhun laga qaaday fal ay ku kici jireen
Next: Nimcada Islaamka: Hoteelkii Reer Aaqireedka–dadka dhintay hoteelkooda